DVD/CD player များ
စင်မြင့်အသံသည်သီချင်းဆိုခြင်း၊ အနုပညာတင်ဆက်မှုများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္မှပါဝင်လိမ့်မည်။ စင်မြင့်ဖျော်ဖြေပွဲများ၏အသံအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်အလို့ငှာစင်မြင့်အသံအမှားပြင်ဆင်ခြင်းကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာရန်လိုအပ်သည်။
ခေတ်များတိုးတက်လာမှုနှင့်အတူယခုအခါကုမ္ပဏီများသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကွန်ဖရင့်အသံကိရိယာများကိုရရှိကြသည်။ အစည်းအဝေးတစ်ခုအောင်မြင်စွာကျင်းပလိုလျှင်ကွန်ဖရင့်အသံကရိယာများ၏အရည်အသွေးသည်အထူးအရေးကြီးသည်။ ဒါဆိုညီလာခံအသံကိရိယာတွေရဲ့အရည်အသွေးကိုထိခိုက်စေတဲ့အချက်တွေကဘာတွေလဲ။ ? ဘာတွေနားထောင်လဲ ...
Stage Professional Audio ၏ Debugging တွင်သတိထားရမည့်အချက်များ
အသံပိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာပညာ၏အမှားရှာပြင်မှုကိုလေးနက်။ တာဝန်သိသောသဘောထားဖြင့်ကုသရန်လိုသည်။ စင်မြင့်အသံပစ္စည်းများ၏ဒီဇိုင်း၊ တည်ဆောက်ပုံ၊ စနစ်တည်ဆောက်ပုံနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တို့ကိုသေချာနားလည်မှသာပိုကောင်း debugging ရလဒ်ကိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အထွေထွေ debugi များအတွက် ...
full-range speaker ၏အဓိပ္ပာယ်
two-way speaker တွင် speaker နှစ်ခု၊ subwoofer နှင့် tweeter တို့ပါ ၀ င်သည်။ subwoofer နှင့် tweeter ကို crossover တစ်ခုဖြင့်ခွဲခြားထားပြီး subwoofer နှင့် tweeter အသီးသီးတို့ဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ Line Array Speakers များနှင့် Power Amplifiers ကျွမ်းကျင်မှုအသံစနစ်များတွင်လိုက်ဖက်သောကျွမ်းကျင်မှုများ၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပြီးတိကျသော ma ...
ကွန်ဖရင့်အသံ၏ကျော်ကြားမှုသည်လူတို့၏အလုပ်အတွက်ကြီးမားသောအဆင်ပြေမှုကိုယူဆောင်လာပြီး၎င်း၏အားသာချက်များကြောင့်လူများသည်၎င်းကို ပို၍ ပို၍ သုံးလာကြသည်။ အစည်းအဝေးခန်း၌ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကွန်ဖရင့်စပီကာများအသုံးပြုမှုကြိမ်နှုန်းသည်အလွန်မြင့်မားသောကြောင့်ညီလာခံစကားပြောသူများဖြစ်စေရန် ...
ပြဇာတ်ရုံများကဲ့သို့သောအိမ်တွင်းပြဇာတ်တင်ဆက်မှုများအတွက်ပထမလိုအပ်ချက်မှာအသံအနုပညာဖြစ်သည်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့အသံအရည်အသွေးအာမခံရမယ်။ ၎င်းသည်နားရွက်ကိုနှစ်သက်စေသောလှပသောလေသံဖြစ်ရမည်။ ပြင်ပလေဟာပြင်ပြဇာတ်ဖျော်ဖြေပွဲ။ ပထမလိုအပ်ချက်မှာအသံနည်းပညာဖြစ်သည်။ ပွဲစဉ်တွင် ...
အိမ်ရုပ်ရှင်ရုံများစွာသည်၎င်းတို့ဂရုမစိုက်သောအရာများ၊ လိုင်းများကိုမည်သို့လမ်းကြောင်းခွဲရမည်၊ အသံကာရံရန်လိုအပ်သောပစ္စည်းများနှင့်အရေးကြီးဆုံးအရာမှာကြယ်စင်မိုးကောင်းကင်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ အချို့မိသားစုများသည်ကြည့်ကောင်း။ တောက်ပသောဥက္ကာခဲများကိုနှစ်သက်ကြသည်။
1. projection position အိမ်ပြဇာတ်ရုံဒီဇိုင်း၏အရေးအကြီးဆုံးအချက်မှာကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော projection position ကိုရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည်။ အိမ်ပြဇာတ်ရုံအလှဆင်ခြင်းကိုရွေးချယ်ပြီးကတည်းကအခန်း၏ projection position ကိုအတည်ပြုပြီးနောက် projection အရွယ်အစားသည်အနည်းဆုံးလက်မ ၁၀၀ ရှိသင့်သည်။ ၁ အချိုးအတိုင်း ...
ပါဝါအသံချဲ့စက်ဝယ်ယူမှုကျွမ်းကျင်မှု [GAEpro အသံ]
ကျွန်ုပ်တို့၏အထင်ကရအသံချဲ့စက်-MB စီးရီးနှင့် ပူးပေါင်း၍ အသံအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုပိုမိုစုံလင်စွာတင်ပြနိုင်သည်။ အသံအပြည့်နှင့်သုံးလမ်းသွားအသံသည်အဘယ်နည်း။ ၁။ ကြိမ်နှုန်းအပိုင်းအခြားသည်ကွဲပြားသည်။ နာမ၌ဖော်ပြသောအတိုင်းကြိမ်နှုန်းအပြည့်သည်ကျယ်ပြန့်သောကြိမ်နှုန်းနှင့်ကျယ်ပြန့်သောလွှမ်းခြုံမှုကိုရည်ညွှန်းသည်။ ယခင်f...
ပါဝါအသံချဲ့စက်တစ်ခုကိုရွေးချယ်သည့်အခါပထမ ဦး စွာ၎င်း၏နည်းပညာဆိုင်ရာအညွှန်းကိန်းအချို့ကို ဦး စွာအာရုံစိုက်ရမည်။ ၁။ ထည့်သွင်းမှု impedance: အများအားဖြင့် ၅၀၀၀ မှ ၁၅၀၀၀ ကြား၊ ယေဘူယျအားဖြင့်ပါဝါချဲ့စက်၏ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုဆန့်ကျင်နိုင်မှုအရွယ်အစားကိုညွှန်ပြသည်။ စွက်ဖက်မှုဆန့်ကျင်ရေးစွမ်းရည်ကိုပိုမိုအားကောင်းစေသည်။
အိမ်တွင်းကဇာတ်ရုံကိုကောင်းကောင်းကြည့်နိုင်တဲ့အခန်းအရွယ်အစားကဘယ်လောက်လဲ။ အောင်မြင်သောအိမ်ပြဇာတ်ရုံဒီဇိုင်း၏အလိုအပ်ဆုံးသောစွမ်းဆောင်ရည်မှာအသံနှင့်ရုပ်ပုံအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ကြောင်းသင်သိထားရမည်။ အသံကောင်းလားမကောင်းလား၊ ပစ္စည်းရဲ့ကိုက်ညီမှု၊ ချိန်ညှိမှု၊ နေရာအချက်ပေါ်မူတည်တယ်။
အိမ်ပြဇာတ်ရုံအတွက် Dolby Atmos ၏အရင်းအမြစ်ကဘာလဲ
Dolby Atmos သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် Dolby Laboratories မှစတင်ထုတ်လုပ်သောအဆင့်မြင့်ပတ် ၀ န်းကျင်အသံစံဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင်ရုံများတွင်သုံးသည်။ ရှေ့၊ ဘေး၊ နောက်၊ ကောင်းကင်စပီကာများကိုခေတ်မီသောအသံသွင်းစနစ်နှင့် algorithms များပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်၎င်းသည်ပတ် ၀ န်းကျင်အသံလှိုင်း ၆၄ လိုင်းအထိထောက်ပံ့ပေးပြီးနေရာအကျယ်အဝန်းကိုခံစားစေသည်။
ယနေ့ခေတ်လူငယ်များအားလပ်ချိန်ပိုများလာသည်နှင့်အမျှနေရာများစွာကိုဖွင့်ချင်သူပိုများလာသည်။ သို့သော်ကောင်းမွန်သောအသံအရည်အသွေးရှိသောအသံသည်သုံးစွဲသူများကို ktv အသံအမှတ်တံဆိပ်ကိုရွေးချယ်ရာတွင်စေ့စပ်သေချာစေရမည်ဖြစ်သောကြောင့် ktv သို့စားသုံးသူများစွာကိုခေါ်ဆောင်လာလိမ့်မည်။ ဒါဆိုဘယ်ဈေးလဲ ...
ငါ့မှာအိမ်ပြဇာတ်ရုံရှိတဲ့အခါနောက်ထပ် KTV အသံကိုပြင်ဆင်သတ်မှတ်ဖို့လိုသလား။
လူနေမှုအဆင့်အတန်းတိုးတက်လာမှုနှင့်အတူလူအတော်များများသည်ရုပ်ရှင်ရုံများကိုတပ်ဆင်ပြီးရှုခင်းအချို့ပတ်လည်ရှိအားလပ်ရက်အိမ်များကိုရုပ်ရှင်ရုံအပြည့်၊ KTV အသံ၊ ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းများနှင့်အခြားဖျော်ဖြေရေးအသုံးအဆောင်များတပ်ဆင်ထားသည်။ ဒါကြောင့်သင်လိုအပ်ရင်ကိုယ်ပိုင် home theatre audio ကိုဘယ်လိုဒီဇိုင်းလုပ်မလဲ။
စျေးကွက်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးဓာတုဗေဒပစ္စည်းများအနေနှင့်ထုတ်လုပ်သူများစွာသည် PVC ပလတ်စတစ်အမှုန်များအပေါ်ထုတ်လုပ်မှုသုတေသနကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာသုတေသနပြုပြီးနောက် PVC ပလတ်စတစ်အမှုန်များသည်ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်စျေးကွက်ထဲတွင်ပေါ်လာနိုင်ပြီး၎င်းသည်သုံးစွဲသူများ၏ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ ယနေ့ ...
PVC အမှုန်များသည်ပလတ်စတစ်အမှုန်အမျိုးအစားတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ပလတ်စတစ်အမှုန်များသည်ယေဘူယျအားဖြင့်အမျိုးအစား ၂၀၀ ကျော်နှင့်အမျိုးအစားထောင်ပေါင်းများစွာကိုခွဲခြားထားသည်။ PVC အမှုန်များသည် pvc ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအမှုန့်ပလတ်စတစ်များကိုရည်ညွှန်းသည်။ PVC သည်တောက်ပသောအရောင်ရှိသော polyvinyl chloride ပလတ်စတစ်ဖြစ်သည်။
home theater standard တွင်စံသတ်မှတ်ချက်နှစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ home theater အတွက်ပတ်လည်အသံချဲ့စက်အတွက်ယေဘူယျသတ်မှတ်ချက်နှင့် home theater အတွက်ပေါင်းစပ်စပီကာစနစ်အတွက်ယေဘူယျသတ်မှတ်ချက် စံနှစ်ခုကိုအကောင်အထည်ဖော်ပြီးတဲ့နောက်ဒါဟာအခြေအနေမရှိတာရဲ့အဆုံးကိုရောက်နေတယ်။
home theater တွင် arc screen သုံးရန်လိုအပ်ပါသလား။
အိမ်ကဇာတ်ရုံတွင်ကွေးညွတ်မျက်နှာပြင်သုံးရန်လိုအပ်ပါသလား။ Curved screen မှာအားသာချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကွေးသောပုံသည်မျက်လုံးဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ပိုညီလိမ့်မည်၊ ဆံပင်များသည်ပြားချပ်ချပ်ထက်ပိုသက်သာလိမ့်မည်၊ 3D ရုပ်ရှင်များကြည့်သည့်အခါပုံသည်ပိုသွက်လာလိမ့်မည်။ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာ ...
Home theater အသံမြှင့်ထားသည်
အခုဆိုရင်လူတွေပိုများလာတာကအိမ်ပြဇာတ်ရုံစနစ်တွေကိုအိမ်မှာတပ်ဆင်တာများလာတယ်။ လူတွေရဲ့လူနေမှုအဆင့်အတန်းတွေစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှလူတွေရဲ့ဘဝအရည်အသွေးအတွက်လိုအပ်ချက်တွေကပိုပိုပြီးမြင့်လာတယ်။ သူငယ်ချင်းများစွာသည်ယခုအခါသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အိမ်တွင်ပြဇာတ်ရုံတစ်ခုတည်ဆောက်လျက်ရှိသည်။
မည်သည့်ပစ္စည်းများသည် home theater sound insulation အလှဆင်ရန်ကောင်းမွန်သနည်း
အသံဖမ်းလုပ်ငန်းတွင် lingo တစ်ခုရှိသည်၊ “ အစမှစက်ပစ္စည်းများဖြင့်ကစားပါ၊ ဝိုင်ယာကြိုးများနှင့်ကစားပါ၊ အဖျားတက်စေသောဒီဇိုင်း” အိမ်များတွင်ရုပ်ရှင်ရုံများအလှဆင်ရာတွင်ဒီဇိုင်းသည်အလွန်အရေးကြီးကြောင်းကိုမြင်နိုင်သည်။ အသံအကာအရံဒီဇိုင်းသည်ကိုယ်ပိုင်များစွာကိုအာရုံစိုက်စေခဲ့သည်။
အိမ်တွင်းကဇာတ်ရုံကို KTV နဲ့သုံးလို့ရလား။
ရိုးရာစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုသည်စားသုံးမှု၏အဓိကဖြစ်လိမ့်မည်။ “ ခေတ်သစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာကိုယ်ပိုင်အဝတ်အစားတွေကိုနှစ်သက်တဲ့အဆင့်မြင့်လူတန်းစားတွေ၊ အရည်အသွေးမြင့်တဲ့အထက်တန်းလွှာလူငယ်တွေ၊ ခိုင်မာတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆန်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်တွေရှားပါးမှုမရှိဘူး။ တရုတ်စားသုံးသူများသည် ...
ပထမဆုံးသတိပြုရမယ့်အချက်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်။ ၁။ အခန်းရဲ့အရွယ်အစားကိုအရင်ဆုံးအာရုံစိုက်ပါ။ ပထမ ဦး စွာအခန်းရဲ့အရွယ်အစားကိုအာရုံစိုက်ပါ။ ဒုတိယအချက်မှာအိမ်ကဇာတ်ရုံရှိပစ္စည်းများ၏အသံစုပ်စက်၊ အသံစုပ်ယူမှုနှင့်ပျံ့နှံ့သက်ရောက်မှုများကိုကြည့်ရန်အရေးကြီးသည်။2ကိုက်ညီမှု ...
ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားခန်းမများတွင်အသံပစ္စည်းကိရိယာများကျော်ကြားမှုနှင့်ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားခန်းမများတွင်အသုံးပြုသူများပြားလာမှုနှင့်အတူရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားခန်းမများတွင်သုံးစွဲသူများ၏ဘ ၀ ကိုအောင်မြင်စွာ ၀ င်ရောက်နိုင်ခဲ့သည်။ အော်ဒီယိုသည်ရုပ်ရှင်နှင့်တယ်လီဖုန်းတို့တွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဧည့်ခန်းထဲမှာတီဗီတစ်လုံးလိုအပ်သေးလား။ မိုဘိုင်းအင်တာနက်ခေတ်တွင်မိဘများသည်ဆိုဖာပေါ်တွင်အိပ်။ ဗီဒီယိုများနှင့်သတင်းများကို၎င်းတို့၏လက်ကိုင်ဖုန်းများတွင်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးတီဗီကိုပိတ်ထားသည်မှာကြာပြီဖြစ်သည်။ ဧည့်ခန်းသည်ဘာမှမလုပ်နိုင်ပါ။ Joule သည်အမျိုးမျိုးကိုကြည့်ရန်လိုအပ်သည်။
အိမ်သုံးရုပ်မြင်သံကြားစနစ်-ယေဘူယျအားဖြင့်အသံဖမ်းခြင်းနှင့်အသံစုပ်ယူမှုအတွက်အောက်ပါအချက်ငါးချက်ကိုအာရုံစိုက်ပါ။ ၁။ ရုပ်မြင်သံကြားစနစ်၏အသံကိုပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်သဘောပေါက်နိုင်သည်။ ပထမ၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောပစ္စည်းများကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာရွေးချယ်ခြင်း ဒါပေမယ့်လည်းအသံစုပ်ယူနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းဂရုပြုပါ။
ပြီးပြည့်စုံသောအသံနှင့်အမြင်အာရုံစနစ်တွင်အသံ၊ အချက်ပြအရင်းအမြစ်၊ ပါဝါချဲ့စက်၊ စီဒီဖွင့်စက်ကဲ့သို့အပိုဆားကစ်များနှင့်ပစ္စည်းများစွာပါ ၀ င်သည်။ အာဏာမှ ...
အားလုံးသိကြသည့်အတိုင်းရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားခန်းမ၏အသံပိုင်းဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်သည်အခြားအသံကိရိယာများထက်အသံစနစ်ပြန်ဖွင့်ခြင်းအပေါ်များစွာသက်ရောက်မှုရှိသည်။ အသံပတ် ၀ န်းကျင်ကိုတိုးတက်စေရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသော်လည်းရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားစတူဒီယိုကိုအလွန်အကျွံလုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ...
အားလုံးသိကြသည့်အတိုင်းရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားခန်းမ၏အသံပတ် ၀ န်းကျင်သည်အခြားအသံကိရိယာများထက်အသံစနစ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုများစွာသက်ရောက်မှုရှိသည်။ အသံပတ် ၀ န်းကျင်ကိုတိုးတက်စေရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသော်လည်းရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားစတူဒီယိုကိုအလွန်အကျွံလုပ်ဆောင်ခြင်းသည်အရာများကိုဖြစ်စေလိမ့်မည်။
ပုဂ္ဂလိကရုပ်ရှင်ရုံသည်နံရံသို့ ၀ င်သင့်သလား၊ စတီရီယိုကိုအပြင်မှာထားသင့်သလား။ ဤအရာသည်အလွန်ရိုးရှင်းပုံရသည်။ —— ရိုးရာ Hi-Fi ကဲ့သို့အပြင်ဘက်သို့တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ နံရံအတွင်းသို့တိုက်ရိုက်ထည့်ပါ၊ နံရံနှင့်ပေါင်းစည်းပါ၊ သို့မဟုတ်အသံမျက်နှာပြင်ဖြင့်ဖန်သားပြင်နောက်၌တိုက်ရိုက်ထားနိုင်သည်။ ဒါတကယ်လား ...
ဧည့်ခန်းတီဗီလိုအပ်သေးလား။ မိုဘိုင်းအင်တာနက်ခေတ်တွင်မိဘများသည်ဆိုဖာပေါ်တွင်အိပ်။ ဗီဒီယိုများနှင့်သတင်းများကိုသူတို့၏ဖုန်းများတွင်ကြည့်လာကြသည်။ တီဗီကိုပိတ်ထားသည်မှာကြာပြီ။ ဧည့်ခန်းသည်ဘာမှမလုပ်နိုင်ပါ။ Variety show တွေခဏခဏကြည့်ဖို့လိုတယ်။
အရင်းအမြစ်-အင်တာနက်အချိန်ထည့်ပါ ။၂၀၂၀-၁၁-၀၅ ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးပြည့်စုံသောအသံနှင့်အမြင်အာရုံတွင်အသံ၊ အချက်ပြအရင်းအမြစ်၊ ပါဝါချဲ့စက်၊ CD ဖွင့်စက်ကဲ့သို့အပိုဆားကစ်များနှင့်ကိရိယာများပါ ၀ င်သည်။ အချက်ပြစနစ်မှအသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားသက်ရောက်မှုများ ...
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ကြိုက်ဗွီဒီယိုခန်းတစ်ခုတွင်အသံပိုင်းဆိုင်ရာကုသမှုကိုဆွေးနွေးပါမည်။ လက်ရှိတွင်ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ၌စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်သောအသံနှင့်ရုပ်မြင်ဒီဇိုင်းများအများစုသည်အသံစုပ်ယူခြင်းနှင့်ပျံ့နှံ့ခြင်းအပါအ ၀ င်အသံပိုင်းဆိုင်ရာကုသမှုကိုပိုမိုအသုံးပြုသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ထိပ်တန်းဖြေရှင်းနည်းအချို့ကိုရောစပ်ထားတဲ့အသံထွက်ကိုသုံးပါတယ်။
၉၀ လွန်နှစ်များက Coke ကိုစွန့်ပစ်ပြီးရေနွေးဘူးကိုကောက်သောအခါ၊ ၈၀ နောက်ပိုင်းလွန်များကတည်ငြိမ်မှုကိုတောင့်တပြီးသူငယ်ချင်းများအသိုင်းအဝိုင်း၌ရေချိုးခြင်းကိုသင်ပြုလုပ်သောအခါအချိန်၏မှော်ကိုသက်ပြင်းချသင့်သည်။ ခေတ်သစ်မိသားစုဘ ၀ တွင်အဘယ်အရာအသစ်များသည်လူတိုင်း၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်သနည်း။ ၎င်းသည်ပုဂ္ဂလိကအကြိုက်ဆုံးအသစ်ဖြစ်သင့်သည်။
၁။ စဉ်းစားရန်အရေးကြီးဆုံးမှာမြေအောက်ခန်းမှယိုစိမ့်မှုဖြစ်သည်။ ပထမဆုံးလုပ်ရမှာကနေရာတစ်နေရာလုံးကိုဂရုတစိုက်စစ်ဆေးပါ။ မြေအောက်ခန်းအသစ်များသည်များသောအားဖြင့်ပိုမိုယိုစိမ့်သည်၊ သို့သော်မြေအောက်ခန်းအဟောင်းများသည်ယိုစိမ့်တတ်သည်။ ရေယိုစိမ့်တာကနံရံတွေကိုဖြည်းဖြည်းတိုက်စားပြီးပစ္စည်းတွေကိုပျက်စီးစေလိမ့်မယ်။ ဒါက ...
ထိပ်တန်းပုဂ္ဂလိကရုပ်ရှင်ရုံတွင်အဘယ်အရာပါဝင်သနည်း၊ ထိပ်တန်းပုဂ္ဂလိကရုပ်ရှင်ရုံစနစ်တည်ထောင်ခြင်းနှင့်ထိပ်တန်းပုဂ္ဂလိကရုပ်ရှင်ရုံများ၊ ဒါတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ၊ Zhongle Bianxiao မင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ ထိပ်တန်းပုဂ္ဂလိကပြဇာတ်ရုံစနစ်၏ဖွဲ့စည်းမှု (ထိပ်တန်းပုဂ္ဂလိကပြဇာတ်ရုံတွင်ပါ ၀ င်သောအရာများ) တွင်ဤအရာသည်နောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
လူမှုစီးပွားရေးသည်လျင်မြန်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်သို့ရောက်သောအခါမြို့နေမိသားစုများသည်အိမ်တွင်ရုပ်ရှင်ကြည့်လိုစိတ်ပိုများလာသည်၊ ၎င်းသည်စနေ၊ တနင်္ဂနွေတွင်မြို့၏ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကိုရှောင်ရှားနိုင်ပြီးမိသားစုနှင့်ကလေးများရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားကိုစီစဉ်ခြင်း ...
ရုပ်ရှင်နှင့်ဂီတကိုစွဲလမ်းနေသောလူများစွာတို့သည်ရုပ်ရှင်နှင့်ဂီတကိုအချိန်မရွေးခံစားနိုင်အောင်အိမ်မှာကိုယ်ပိုင်ပြဇာတ်ရုံတစ်ခုတပ်ဆင်လိုကြသည်။ သို့သော်လူတိုင်းကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသောနောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုရှိသည်၊ ၎င်းသည်ကိုယ်ပိုင်ပြဇာတ်ရုံတစ်ခုအတွက်မည်သည့်အခန်းအမျိုးအစားဖြစ်သနည်း။ လူများစွာရှိသော်လည်း ...
ယနေ့ခေတ်တွင်ကိုယ်ပိုင်ရုပ်ရှင်ရုံများတပ်ဆင်ခြင်းသည်လမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုဖြစ်လာပြီးအိမ်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားဝါသနာအိုးများသည်၎င်းတို့၏အိမ်အလှဆင်မှုပုံစံများကိုအမှန်တကယ်ပေါင်းစပ်နိုင်သော home private theatre တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရန်မျှော်လင့်နေကြသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတိုင်းရဲ့အနုပညာစံနှုန်းတွေကြောင့် ...
Private Home Theatre ၏ Acoustic ကုသမှုတွင်နားလည်မှုလွဲမှားခြင်း
ယခုအခါရုပ်ရှင်များကြည့်ရန်အမျိုးမျိုးသောစီးပွားဖြစ်ရုပ်ရှင်ရုံကြီးများသို့သွားစရာမလိုတော့ပါ၊ အကြောင်းမှာစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်သီးသန့်လွတ်လပ်သောအိမ်သီးသန့်ရုပ်ရှင်ရုံများတည်ဆောက်ခြင်းတို့သည်ပိုင်ရှင်အများစု၏ရွေးချယ်မှုဖြစ်လာသည်။ သက်တောင့်သက်သာရှိသောအိမ်ကြည့်ရှုနိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရုပ်မြင်သံကြားသက်ရောက်မှုများရှိသည်။
ပရိုဂျက်တာတစ်လုံး ၀ ယ်ဖို့အကြံဥာဏ်တွေကဘာတွေလဲ
ပထမဆုံးအာကာသ၏အရွယ်အစားရွေးချယ်မှု projector ၏အာကာသအရွယ်အစားပေါ်မူတည်သည်။ ဧည့်ခန်းတွင်တပ်ဆင်လျှင်ဧည့်ခန်းနေရာသည်လုံလောက်ကျယ်ဝန်းရပါမည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်ဧည့်ခန်းဧရိယာသည်စတုရန်းမီတာ ၂၀ ထက်မပိုသင့်ပါ။
အရင်းအမြစ်၊ အင်တာနက် Add အချိန်-၂၀၂၀-၁၁-၁၀ နှိပ်ပါ၊ စျေးကွက်တွင်ကိုယ်ပိုင်ရုပ်ရှင်အသံတံဆိပ်များစွာရှိသည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များစွာနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသောကိုယ်ပိုင်ရုပ်ရှင်ရုံတစ်ခုတည်ဆောက်လိုသောပိုင်ရှင်တစ် ဦး အနေနှင့်လိုအပ်သောအရာကိုပြောရန်ခက်သည်။ ဒီအချိန်မှာဒါဟာအရမ်း ...
ပုဂ္ဂလိကရုပ်ရှင်ရုံစနစ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်စက်ပစ္စည်းများပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှု၏ရလဒ်ဖြစ်ကြောင်းစက်မှုလုပ်ငန်းရှိသူများသိသည်။ ထို့ကြောင့်ပုဂ္ဂလိကရုပ်ရှင်ရုံဝါသနာရှင်များသည်ကိုယ်ပိုင်ရုပ်ရှင်ရုံတစ်ခုတည်ဆောက်ရာတွင်ပစ္စည်းကိရိယာများပေါင်းစပ်ခြင်းကိုအထူးဂရုပြုလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးတော့ကိုယ်ပိုင်ပြဇာတ်ရုံတစ်ခု ၀ ယ်ဖို့မဟုတ်ဘူး။
ငါတို့မိသားစုအတွက်သီးသန့်ဧည့်ခန်းသီးသန့်ပြဇာတ်ရုံစနစ်ကိုဖန်တီးဖို့ငါတို့ယုံကြည်မှုရှိတဲ့အခါ၊ ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ဧည့်ခန်းနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကရတနာတွေဆီက ၀ ယ်လာတဲ့ဧည့်ခန်းအသံဖမ်းစက်တွေကမင်းကိုစမလုပ်နိုင်အောင်လုပ်ပြီးဘာကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုရုန်းကန်ရတော့တာပဲ။ ဘာလုပ်မလဲ Bian Xiao ကမင်းကိုပြောဖူးတယ် ...
HD Karaoke VOD စက်အတွက်ဘာကိုရွေးမလဲ။ ဘယ်တံဆိပ်ကကောင်းတယ်
ကွန်ယက်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကိုတစ်လောကလုံးလွှမ်းခြုံမှုနှင့်အတူပိုမိုအဓိပ္ပါယ်မြင့်စမတ်အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်များဖြစ်သော high-definition ကာရာအိုကေကာရာအိုကေစက်များ၊ high-definition digital TV နှင့် high-definition digital DV တို့သည်ဘဝတွင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ကြည်လင်ပြတ်သားသောရုပ်ထွက်အရည်အသွေးနှင့်အသံ ...
ကာရာအိုကေကာရာအိုကေစက်သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်အလွန်လူကြိုက်များသောကာရာအိုကေစက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုသီးခြားဗားရှင်းနှင့်အွန်လိုင်းဗားရှင်း ဟူ၍ နှစ်မျိုးခွဲခြားထားသည်။ stand-alone version သည်မိသားစုယူနစ်အစည်းအဝေးခန်းများနှင့်အခြားနေရာများအတွက်သင့်တော်ပြီး network version သည်အကြီးစား KTV အသုံးပြုရန်သင့်တော်သည်။ အဓိကမိတ်ဆက်ပေးပါရစေ ...
Professional Karaoke Player - ကာရာအိုကေကိုဘာကြောင့်လေ့လာသင့်သလဲ
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကာရာအိုကေကစားသမားတစ် ဦး ဖြစ်ရန်သင်၌မိုက်ခရိုဖုန်း၊ တေးဂီတစာရွက်အချို့၊ တေးဂီတနှင့်သီချင်းစာသားများအကြောင်းစာအုပ်တစ်အုပ်ရှိရန်လိုပြီးအရေးကြီးဆုံးမှာကာရာအိုကေစက်လိုအပ်သည်။ ကာရာအိုကေစက်များကိုကာရာအိုကေဆိုင်အများစုမှအလွယ်တကူ ၀ ယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ ...
စပီကာအမျိုးအစားခွဲခြားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဗဟုသုတနည်းသည်
ဘဝအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုအနေနှင့်ကားများသည်တက္ကဆက်ပြည်နယ်ရှိမိသားစုထောင်ပေါင်းများစွာသို့ ၀ င်ရောက်လာသည်။ ကားများ၏နားများဖြစ်သောကြောင့်ကားအသံသည်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများစွာအတွက်ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ကားအော်ဒီယိုကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းသည်သင့်ကား၏အသံအရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေရုံသာမကသင်၏မောင်းနှင်မှုကိုပါတိုးတက်စေလိမ့်မည်။ ငါ ...
အသံချဲ့စက်ကိုအများအားဖြင့် ဦး ချိုဟုလူသိများသည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင်သူတို့ဟာလျှပ်စစ်အချက်ပြတွေကိုအသံအဖြစ်ပြောင်းပေးနိုင်တဲ့လျှပ်စစ်-အသံသွင်းကိရိယာများဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည်အသံစနစ်များအတွက်အရေးကြီးသောကိရိယာများဖြစ်သည်။ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကိုအသံစွမ်းအင်အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးသော electroacoustic transducers များထဲမှတစ်ခုအနေနှင့်အရည်အသွေးနှင့်အရည်အသွေးသည် ...
မိသားစုအသုံးပြုရန်အတွက်အထူးနေရာယူထားပြီးစျေးကွက်ရှိကာရာအိုကေစက်အများစုကိုမိသားစု ၀ င်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ပျက်ကွက်သည်။ မိသားစုသုံးရန်အမှန်တကယ်သင့်တော်သည်။ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီး၊ သီချင်းစာကြည့်တိုက်၊ သုံးစွဲသူများ၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတတ်နိုင်ဆုံးအရွယ်အစားသည်သင့်တော်သည်။
မိသားစုကာရာအိုကေစက်များကိုအများအားဖြင့်ကာရာအိုကေကာရာအိုကေစက်များဟုခေါ်သည်။ အစောဆုံးကာရာအိုကေစက်များမှာအသံသာပါသော်လည်းရုပ်ပုံမပါရှိသည့်ကက်ဆက်တိပ်အသံဖမ်းစက်များဖြစ်သည်။ ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်အသံဖမ်းစက်ဗီဒီယိုထွက်လာပြီးနောက်ကာရာအိုကေကိုပုံနှင့်စာသားများအဖြစ်အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည်။
ကာရာအိုကေစနစ်တစ်ခု ၀ ယ်တာကကြီးမားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်သေချာဂရုတစိုက်ကြည့်ရင်မင်းမှာကာရာအိုကေစပီကာရှိခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးကိုမင်းတွေ့လိမ့်မယ်။ သူတို့ကိုမင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်မှာ ဒါကဒီ့ထက်ပိုကောင်းတာမရှိဘူး။ ဟင့် ...
အကယ်၍ သင်သည်သီချင်းနှင့်သီချင်းဆိုခြင်းကိုတစ်ပြိုင်နက်ခံစားရန်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုကြိုးစားရှာဖွေနေပါက၊ ကာရာအိုကေစနစ်ကိုသုံးရန်မည်သို့လေ့လာရမည်ကိုစိတ်ဝင်စားပါလိမ့်မည်။ ကာရာအိုကေစနစ် ktv ကာရာအိုကေသည်ပိုမိုထိရောက်စွာပြောဆိုရန်နှင့်မိမိကိုယ်ကိုထုတ်ဖော်ရန်သင်ယူရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြားသူများ ကာရာအိုကေစက်မှာသီချင်းဆိုတဲ့အခါ ...
DJ DJ စပီကာစနစ်များ - မှန်ကန်သော DJ စပီကာများရှာဖွေရန်အကျဉ်းလမ်းညွှန်
လူအများစုကအများပြည်သူပိုင်နေရာတစ်ခုမှာအသံအကျယ်ကြီးနဲ့သီချင်းတွေကိုအသံကျယ်ကျယ်နဲ့အသံကျယ်ကျယ်နဲ့အသံကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖော်ပြဖို့“ DJ DJ speaker” ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးပါတယ်။ အလွတ်သဘောအကအဖွဲ့အားလုံးသည်ဥပမာများဖြစ်သည်။
21-03-26 တွင် admin မှ
KTV ကာရာအိုကေစက်ဖွင့်သူသည်သူတို့၏အကြိုက်ဆုံးတေးဂီတကိုနားထောင်ရန်သို့မဟုတ် karaoke.ktv ကာရာအိုကေစက်၏သီချင်းဆိုခြင်းနှင့်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုလောကသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုရှာဖွေနေသူတိုင်းအတွက်များစွာသောလူများသည်ကာရာအိုကေနှင့်၎င်းနှင့်အတူပျော်စရာကိုနှစ်သက်သည်။ သင်သည်ဤလူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်သင်၏သီချင်းဆိုခြင်းနှင့်ဂီတကိုရယူလိုသည်။
touch all-in-one machine နှင့်သာမန်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကြားခြားနားချက်
21-03-24 တွင် admin မှ
ပထမ ဦး စွာ desktop ကွန်ပျူတာများနှင့်မှတ်စုစာအုပ်များအပါအ ၀ င်သာမန်ကွန်ပျူတာများအသွင်အပြင်၊ အသုံးအများဆုံးအရွယ်အစားသည် ၁၄.၅ မှ ၂၂ လက်မ၊ touch screen all-in-one စက်ကိုပုံစံအမျိုးမျိုး ခွဲ၍ ရနိုင်သော်လည်း all-in-one စက်ကိုနံရံပေါ်တွင်ချိတ်ဆွဲထားပြီးမြေပြင်ပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်ချထားသည်။
စက်မှုပြသမှုရွေးချယ်မှုသည်စျေးပိုကြီးသည်မဟုတ်၊ သင့်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီသင့်ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန်များကို ရွေးချယ်၍ အသင့်တော်ဆုံးအတွေ့အကြုံကိုပေးနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ အောက်ပါသည်ရှင်းပြသည်၊ နောက်ခံအလင်းသက်တမ်း၊ အေးသော၊ အသင့်တော်ဆုံးစက်မှုမျက်နှာပြင်ကိုမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်ကိုရှင်းပြသည်။
မည်သည့် Karaoke KTV စနစ်များကိုသင်ကြားဖူးပါသနည်း။ ဤအရာသည်အိမ်ဖျော်ဖြေရေးယူနစ်များအတွက်ပြုလုပ်သောဖျော်ဖြေရေးယူနစ်များအားလုံးအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင်အရိုးရှင်းဆုံးပြောရရင်ကာရာအိုကေ KTV စနစ်သည်ကာရာအိုကေစက်တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲရန် TV set တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်သလို ...
ဖော်ပြချက်ကိုအင်္ဂလိပ် (အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု) ဘာသာသို့ ပြန်လည်၍ ပြန်ဆိုရန်ဘာသာပြန်ရန် An American online music application first launched under the name in 2021 and then on iOS devices in 2021.sing karaoke The program ဌမှာ ...
ကာရာအိုကေတေးဂီတသည်နားထောင်သူများသီဆိုသောသီချင်းများဟုသတ်မှတ်ထားသောစည်းချက်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ကာရာအိုကေသီချင်းသည်အခြားဂီတပုံစံများနှင့်မတူဘဲ၎င်းသည်တီးခတ်နေစဉ်အများစုသီဆိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကာရာအိုကေကိုအလိုအလျောက်ခံစားရစေသည်၊ ၎င်းသည်နားထောင်ခြင်းကိုပိုပျော်စေသည်။ ကာရာအိုကေစနစ်များ ...
21-03-18 တွင် admin မှ
ကြိုးမဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းစနစ်များသည်ဂီတပညာရှင်များနှင့်အခြားဂီတချစ်သူများကြားတွင်ပိုမိုရေပန်းစားလာသည်။ မတူညီတဲ့ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းတွေကိုအတူတူကြိုးတွေနဲ့ချိတ်ဆက်တာ၊ ဒါမှမဟုတ်လိုက်ဖက်တဲ့နားကြပ် (သို့) နားကြပ်အတွက်စိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါ။ ကြိုးမဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းစနစ်သည်စွယ်စုံသုံးနိုင်သည်။
ကာရာအိုကေစနစ်မိုက်ခရိုဖုန်း ၀ ယ်သောအခါထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များ
မင်းအိမ်အသစ်ကာရာအိုကေစနစ်အတွက်စျေးကွက်ထဲရောက်နေတယ်ဆိုရင်မင်းမိုက်ခရိုဖုန်းအတွက်ရနိုင်တဲ့ရွေးချယ်စရာတွေကိုကြည့်ချင်လိမ့်မယ်။ ကာရာအိုကေစနစ်မိုက်ခရိုဖုန်းကမင်းသီချင်းဆိုတဲ့အခါမှာမင်းရဲ့အသံအရည်အသွေးကအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးမင်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်။ သင်သီချင်းဆိုနိုင်ရန်မှန်ကန်သောပစ္စည်းကိရိယာများရှိသည်။
သင်သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသောကာရာအိုကေစက်တစ်လုံးကိုသုံးမည်ဆိုပါကသင်သီချင်းဆိုခြင်းကိုနောက်တစ်ဆင့်သို့တက်ချင်သောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကသီချင်းမဆိုတဲ့အခါရယ်စရာဖြစ်စေ၊ ပိုအရေးကြီးတာဖြစ်စေ၊ ပိုသီချင်းမဆိုတဲ့အခါဘယ်လောက်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်လဲဆိုတာမင်းသိပါတယ်။ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသောကာရာအိုကေစက်များသည်သင်ကဲ့သို့သီချင်းဆိုနိုင်သည်။
ကိုယ်ပိုင်ကြိုးမဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းကိုဘယ်လို ၀ ယ်ရမလဲ။ ကြိုးမဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းကို ၀ ယ်ဖို့နည်းလမ်းတွေကဘာတွေလဲ
စျေးကွက်တွင်ရောင်းချသောမိုက်ခရိုဖုန်းများကိုပစ်ကပ်ခေါင်းအရအဓိကအားဖြင့်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးခွဲထားသည်။ တစ်ခုကအသံအရည်အသွေးကောင်းဖြင့်အဓိကအားဖြည့်ပေးပြီး power supply မလိုအပ်ပါ။ အခြားတစ်ခုမှာ condenser microphone ဖြစ်ပြီးတာရှည်ခံမှုရှိခြင်းဖြစ်သည်။ မင်္ဂလာပါ ...
ကွန်ဖရင့်မိုက်ခရိုဖုန်းသည်တစ် ဦး ချင်းစီဖြစ်ပုံရသည်၊ သို့သော်၎င်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်ကြွယ်ဝသောပစ္စည်းမျိုးစုံဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောအစွမ်းထက် audio-visual system ဖြစ်သည်။ အစည်းအဝေးစနစ်ကိုဖောက်သည်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီပြင်ဆင်ထားသောအခါမှသာကွန်ဖရင့်သည်၎င်း၏တိုးတက်မှုကိုအခွင့်ကောင်းယူနိုင်သည်။
21-03-12 တွင် admin မှ
စျေးကွက်တွင်အိမ်ကာရာအိုကေစနစ်များအမျိုးအစားများစွာရှိပါသည်။ ကာရာအိုကေစက်စနစ်အချို့မှာမိုက်ခရိုဖုန်းထဲသို့သီချင်းဆိုခွင့်ပြုသောရိုးရှင်းသောအသံစနစ်များဖြစ်ကာစပီကာသည်သင်၏အသံကိုပြန်ဖွင့်ပေးလိမ့်မည်။ အခြားအရာများသည်အသံလမ်းကြောင်းများကိုဖွင့်ရန်ခွင့်ပြုသောကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်တစ်ခုနှင့်ပြည့်စုံသည်။
မင်းအိမ်မှာကာရာအိုကေစက်တစ်လုံးတပ်ဆင်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်မင်းစဉ်းစားရမယ့်အရာလေးတွေရှိတယ်။ သင်အကြိုက်ဆုံးသီချင်းများနှင့်သီဆိုနိုင်ပြီးလူအများကသင့်ကိုစွဲလမ်းစေလိုလျှင်သင်ထွက်သွားသင့်သည်။ သင်နှစ်သက်သောသီချင်းများနှင့်အကောင်းဆုံးကာရာအိုကေစက်ကိုရယူပါ။
21-03-03 တွင် admin မှ
၂၀၂၁ မှ ၂၀၂၆ အထိကမ္ဘာ့ကြိုးမဲ့စပီကာစျေးကွက်သည်နှစ်စဉ်တိုးတက်နှုန်း ၁၄%ကျော်တိုးတက်လိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းထားသည်။ ၀ င်ငွေဖြင့်တွက်ချက်ထားသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကြိုးမဲ့စပီကာစျေးကွက်သည်ခန့်မှန်းချက်ကာလအတွင်း ၁၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအကြွင်းမဲ့တိုးတက်မှုရရှိလိမ့်မည်။ ၂၀၂၁ မှ ၂၀၂၆ ကာလအတွင်း marke ...
စမတ်ဖုန်းများဖွံ့ဖြိုးလာသည်နှင့်အမျှမိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ တွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်ဖြစ်လာသည်။ ၎င်းတို့ကိုဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများအဖြစ်သာမကဖျော်ဖြေရေး၊ ငွေပေးချေမှုနှင့်တုန်ခါမှုအဖြစ်လည်းသုံးသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အဆင်ပြေမှုကိုယူဆောင်လာနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းမှာရေစိုခံတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်မရှိရင်မတော်တဆဖြစ်သွားနိုင်တယ်။
အသံပါဝါချဲ့စက်၏အခန်းကဏ္ and၊ အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များ
21-01-26 တွင် admin မှ
ပေါင်းစည်းထားသောအသံပါဝါချဲ့စက်ကို set success ဟုခေါ်သည်။ ပေါင်းစည်းအသံချဲ့စက်၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် front-stage circuit မှပေးပို့သောအားနည်းသောလျှပ်စစ်အချက်ပြမှု၏စွမ်းအားကိုချဲ့ထွင်ရန်နှင့်လျှပ်စစ်သံကိုပြောင်းလဲစေသောစပီကာကိုမောင်းနှင်ရန်လုံလောက်သောလျှပ်စီးကြောင်းကြီးကိုထုတ်ပေးသည်။
အသံချဲ့စက်သည်အသံကိုထုတ်ပေးသော output element တွင် input audio signal ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြန်လည်တည်ဆောက်ထားသောအချက်ပြအသံအတိုးအကျယ်နှင့်ပါဝါအဆင့်သည်စံပြဖြစ်ရမည်၊ ထိရောက်မှု ရှိ၍ ပုံပျက်ပန်းပျက်ဖြစ်ရမည်။ အသံလှိုင်းသည် 20Hz မှ 20000Hz ခန့်ရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်အသံချဲ့စက်ကောင်းကောင်းရှိရမည်။
ကာရာအိုကေစက်ကိုသီးသန့်ကာရာအိုကေစက်နှင့်အွန်လိုင်းကာရာအိုကေစက် ဟူ၍ ခွဲခြားထားသည်။ ရည်ရွယ်ချက်အားဖြင့်ခွဲခြားပါ၊ စီးပွားဖြစ်ကာရာအိုကေစက်၊ အိမ်ကာရာအိုကေစက် ၁။ ဂီတကိုနှစ်သက်သောသူများ၊ သီချင်းဆိုရန်နှင့်လူကြိုက်များသောအဆိုတော်များဖြစ်လာလိုပါက KTV ကိုအိမ်သို့ရွှေ့ပါ၊ သင်ကြိုက်သလောက်သီဆိုပါ၊ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်လာပါ။
၂၀၂၁ တွင်ကာရာအိုကေစက်၏စျေးကွက်စကေးသည်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်အတွင်း (အဓိကပစ်မှတ်ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်စက်မှုလုပ်ငန်း၏အထွက်နှင့်အထွက်တန်ဖိုးအပါအ ၀ င်) အဓိကကဏ္industriesများကို ဦး တည်သုတေသနနှင့်ဒေတာစောင့်ကြည့်မှုများစွာပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ လူ ဦး ရေ၊ လူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်၊ ...
20-12-25 တွင် admin မှ
a Qualtz LOCked ပုံစံ - ၎င်းသည်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းအတွက်တိကျပြီးတည်ငြိမ်သောကြိမ်နှုန်းကိုထုတ်ပေးရန် quartz သုံးလှိုင်းတစ်ခုကိုအသုံးပြုသည်။ ဆားကစ်သည်ရိုးရှင်းပြီးကုန်ကျစရိတ်လည်းနည်းသည်။ ၎င်းသည်ယနေ့ကြိုးမဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းများ၏ standard circuit design ဖြစ်သည်။ ဤမိုက်ခရိုဖုန်းနှင့်လက်ခံသူအမျိုးအစားသည်သာဖြစ်နိုင်သည်။
Wireless microphone U-segment နှင့် V-segment ၏ V-segment နှင့် U-segment တို့အကြားကြိမ်နှုန်းဘယ်လောက်ကွာခြားသလဲ။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်အပျော်တမ်းရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းလှိုင်းများဖြစ်သည်။ UHF band သည် 145 MH ဗဟိုချက်ရှိသောအလွန်ကြိမ်နှုန်းမြင့် band တစ်ခုဖြစ်သည်။
bluetooth အသံချဲ့စက် application
အမျိုးမျိုးသော interfaces USB interface ပါ ၀ င်သော Bluetooth amplifier adapter: flash disk type, Mini Key type, folding type, box USB port များနှင့် Mac OS X ရှိသော Windows ကွန်ပျူတာများတွင်သုံးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်သေးငယ်ပြီးချစ်စရာကောင်းသော Sony's PCGA-BA1 သည် ၅ ဂရမ်သာအလေးချိန်ရှိပြီးအမြီးမှအချက်ပြမီးသည်အပြာရောင်အလင်းကိုပေးသည်။
bluetooth အသံချဲ့စက်သည်ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ထုတ်လွှင့်မှုနည်းပညာအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်တွင်ကြိုးမဲ့နည်းပညာသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာရှိနေပြီး၎င်းတို့ထဲမှအချို့သည်ရင့်ကျက်သောအဆင့်သို့ပင်ရောက်နေပြီဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်အနီအောက်ရောင်ခြည်နည်းပညာကိုအိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတွင်တွေ့နိုင်သည်။
၂၀-၁၁-၂၆ တွင် admin မှ
ယနေ့ခေတ်တွင်လူများစွာသည်အလုပ်နှင့်လေ့လာမှုဖိအားကိုသက်သာစေရန်ခေတ်မီကာရာအိုကေစက်များကိုအသုံးပြုကြသည်။ အချို့လူများသည် KTV တွင်ရှိသော်လည်းလူများစွာသည်အဆင်ပြေစေရုံသာမကဖျော်ဖြေရန်လူတို့၏ဆန္ဒနှင့်အညီအိမ်တွင်သီချင်းဆိုခြင်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။ ရုပ်မြင်သံကြားအကျိုးသက်ရောက်မှု ကာရာအိုကေကစားသူများ ...
စပီကာများအပြင်ကာရာအိုကေကိရိယာများ၊ ဂီတပစ္စည်းများသည်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ အသံချဲ့စက်၏အရည်အသွေးသည်လည်းအလွန်အရေးကြီးသည်။ KTV ၏လုပ်ဆောင်ချက်ကိုသင်၏အခန်းအရွယ်အစားနှင့်အလှဆင်ပစ္စည်းများနှင့်ပေါင်းစပ်သင့်သည်။ အခန်းအမျိုးမျိုး၏ကွဲပြားသောနေရာများတွင်ကွဲပြားသောပါဝါအမ်စက်များကိုသုံးသင့်သည်။ သတိထားပါ ...
20-09-29 တွင် admin မှ
Canton Fair နှင့် Hongkong Electronics Fair တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြခန်း
ကာရာအိုကေဟူသောအမည်သည်ဂျပန်စကားလုံးများဖြစ်သော "အနတ္တ" နှင့် "သံစုံတီးဝိုင်း" မှဆင်းသက်လာသည်။ အကြောင်းအရာပေါ် မူတည်၍ ကာရာအိုကေသည်ဖျော်ဖြေရေးနေရာတစ်ခု၊ တေးဂီတနောက်ကြောင်းပြန်သီချင်းဆိုခြင်းနှင့်နောက်ခံတေးဂီတပြုလုပ်ရန်ကိရိယာတစ်ခုကိုဆိုလိုသည်။ မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆိုကျွန်ုပ်တို့သည်မိုက်ခရိုဖုန်း၊ တောက်ပသောအလင်းကိုအမြဲပုံဖော်သည်။
အမှတ် ၃၊၇၊ Pingxi လမ်း၊ Nanping နည်းပညာစက်မှုဥယျာဉ်၊ Zhuhai၊ Guangdong၊ တရုတ်
ကြိုးမဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းကာရာအိုကေ, Airplay လက်ခံသူ, ကာရာအိုကေအိတ်ဆောင်မိုက်ခရိုဖုန်း, ကားအတွက် Usb Cd Player,